Taariikhda Kooban ee Ramla Ali oo Soomaaliya u meteleysa Ciyaaraha Olimbikada, maantana la ciyaareysa Maria Nechita – Gool FM
(Tokyo) 26 Luulyo 2021. Warbixintaan waxaan ku eegeynaa Taariikhda Kooban ee Feeryahanadda Soomaaliyeed ee Ramla Ali oo maanta iyadoo calankeenna huwan la ciyaareysa Maria Nechita.
Waxay ahayd socod barad markii walaalkeed ka weyn oo ku jira da’da 12-ka sano uu ku dhintay madfac intii ay socdeen dagaalladii sokeeye, qoyskeedu waxay dhex mareen roob sidii dhagaxaanta u hooray, kaasoo qaar ka mid ah ay ku dhinteen Baabuurka gudahiisa, sida ay Ramla hooyadeed xusuusato, ujeedku wuxu ahaa inay ka baxsadaan Muqdisho ka hor intaanay ku sii adkaysan safar sagaal maalmood oo doon ay ku tagayaan Kenya, kaasoo intii ay sii socdeen rakaab badani u dhinteen Gaajo.
Shaqsiga aan ka sheegeynayno waa Ramla Ali oo iyadoo huwan calanka buluugga ah ee Soomaaliya maanta la tartamaysa Maria Nechita oo iyana mataleysa Romania ciyaaraha Olimbikada 2020 ee Japan, gaar ahaan qeybta dumarka ee Feerka.
Tartanka: Tokyo 2020 Olympics
Tartamayaasha: Ramla Ali vs Maria Nechita
Dalalka: Somalia vs Romania
Ciyaarta: Women’s Featherweight 57-54kg
Taariikhda kulanka: Maanta oo Isniin ah 26-ka bisha July 2021
Saacadda: 02:12 Duhurnimo
Garoonka: Kokugikan Arena – Tokyo – Japan
Tagitaankeedii Magaalada London ee qaxooti ahaan ina Ali kuma aysan guuleysan oo kaliya horyaallada Ingiriiska iyo kan Afrika, laakiin sidoo kale waxay hadda haystaa horyaal miisaanka culus ee Adduunka.
Markii qoyskeedu ku yimid London qaxooti ahaan, Ramla waxaa laga soo kaxeeyey iskuulka, iyadoo miisaankeedu aad u badan yahay.
Waxay tagtay qolka jimicsiga ee deegaanka waxayna gashay xisad jimicsi, laakiin uma aysan sheegin qoyskeeda iyada oo u maleynaysa inay u diidi doonaan cayaaraha feerka, maadaama aan inta badan looga baran gabar haysata diinta islaamka.
Ramla waxay ku caan baxday ugu danbeyn fanka feerka, waxayna soo jiidatay dad badan oo xiiseeya Feerka, sidoo kale 31-sano jir muhiim ayey u tahay inay abuurto isbadal ku noqoshada dalkeeda Soomaaliya, dal inta badan lagu tilmaamo inuu yahay dal fashilmay, xasillooni darrada ka jirta awgeed.
“Dhaqdhaqaaqe caan ah oo u ololeeya arrimaha siyaasada kana soo jeeda Soomaaliya ayaa ii soo diray fiidiyoow ku saabsan labo gabdhood oo bilaabay ciyaaraha feerka wuxuna igu yiri‘ waxaad dhiirrigelineysaa in badan, waxaad dhiirrigelineysaa jiil cusub ’taasna waa wax layaab leh,”
“Taasi waa nooca isbeddelka ah ee aan marwalba jeclaa inaan ku arko dalka – si aan u arko in haweenku aysan ka baqaynin inay sameeyaan waxay rabaan, inay noqdaan cidda ay doonayaan oo aysan ka baqayn inay ka hor yimaadaan fikradaha la isku haysto.” ayay tiri Ramla.
Hiwaayad ahaan, waxay noqotay haweeneydii ugu horreysay ee muslim feeryahan ah oo ku guuleysata horyaal Ingiriis ah ka hor inta aysan go’aansan inay matasho Soomaaliya sanadkii 2017-kii.
“Laga soo bilaabo da’da yar ee Soomaaliya, waxaa lagugu barbaariyay inaad noqotid qof guri joogta ah, Hooyaday marna looma oggolaan inay dugsiga aado sidaa darted, Hooyaday waa mid aan waxna qorin waxna akhrin, markaa inay ogaato inaan gabdhaha ku dhiirrigeliyey inay ka soo muuqdan cayaaraha feerka ayaa xaqiiqdii ah nooc isbedel ah oo aan waligay doonayay inaan arko.” ayay hadalkeeda raacisay Ramla.
Laakiin, Ramla waxay rajeynaysaa inay tillaabooyin dhowr ah horay u sii qaaddo, iyadoo kaliya noqon doonin qofkii ugu horreeyay ee Soomaali ah ee taga ciyaaraha Olimbikada, laakiin sidoo kale waxa ay doonaysaa inay ku guuleysto horyaal caalami ah iyo inay guul ka soo hoyso ciyaaraha Olimbikada.
Maanta oo isniin ah marka ay saacadda geeska Afrika tahay 2:12 Duhurnimo ayay Ramla Ali la ciyaari doontaa Maria Nechita ciyaar qeyb ka ah feerka Olimbikada Adduunka.
Soomaalida oo dhan ayaa si aan caadi ahayn u sugaya guusha Ramla, waxayna codsatay Ramla in lagu taageero oo duco la la garab istaago maanta oo ay feerka la gali doonto Gabadha reer Romania ee Maria Nechita.
Haddii aan nahay bahda Gool FM guul baan u rajaynaynaa Ramla.
Man United iyo Real Madrid oo ku heshiiyey saxiixa Raphael Varane... (Goorme ayaa lagu dhawaaqi doonaa u dhaqaaqistiisa Old Trafford?)